October 9, 2020 - Padaethar
ဘဝမှာ အရှက်ရဆုံးနေ့ကိုပြောပါဆိုရင် ဒီနေ့လို့ပြောရမယ်
October 9, 2020 by Padaethar
ဘဝမှာ အရှက်ရဆုံးနေ့ကိုပြောပါဆိုရင် ဒီနေ့လို့ပြောရမယ် “အဘိုးကြီးက ကျွေးသလောက်ငတ်တယ်” တဲ့မနက်စောစောဆိုရင် ကျုပ်ကဆာပြီ။ ဟိုတုန်းကတော့ ဘဏ်ကိုသွားနိုင်တော့ ပင်စင်လေးကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်၊ပိုက်ဆံလေးကိုင်ပြီး စားချင်တာ ဝယ်စားနိုင်သေးတယ်။ ခုတော့ လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တာ ၂ နှစ်ကျော် သွားပြီ။ချော်လဲပြီးကတည်းက မထနိုင်တော့တာ ခုထိပါပဲ။မိုးလင်းရင် ဗိုက်ဆာတယ်။ ဆန်ပြုတ်လေးဖြစ်ဖြစ် သောက်ချင်တယ်။ပျော့တာလေးတွေပဲ စားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကျွေးတာ စားရမယ်။ ချေးများနေလို့မရဘူးလေ။ ကိုယ်က ရှာနိုင် ဖွေနိုင်တော့တာမှ မဟုတ်တာ။ “အဖေ … ရော့ဒီမှာ … စား”ဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တယ်။ မုန့်ဟင်းခါးပဲ။ ပဲကြော်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဝါးနိုင်မှာလဲ။ မုန့်ဟင်းခါးကအခန့်မသင့်ရင် ဝမ်းသွားမယ်။ အိမ်သာကို ဖင်ဒယဥ့်တိုက်နဲ့ သွားရတဲ့ဒုက္ခက သေးတာမဟုတ်ဘူး။ ဆီးအိုးကို တောင် ဆောင့်အောင့်နေကြတာ။“အဖေ ဘာလို့ မစားတာလဲ” “အဖေ ဗိုက်မဆာလို့ပါကွာ” “အဲ့ဒါဆိုလည်း … Read more
ချွေးထွက်လွန်ကဲပြီး မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ အနံ့အသက်မကောင်းဘူးဆိုရင် ဒီလိုလုပ်ပါ…
ချွေးထွက်လွန်ကဲပြီး မိမိ ခန္ဓာကိုယ်မှ အနံ့အသက်မကောင်းဘူးဆိုရင် ရာသီဥတုပူလောင်အိုက်စပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ ချွေးထွက်များခြင်း၊ ချွေးထွက်လွန်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြင်းထန်စူးရှတဲ့ကိုယ်နံ့တွေက စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာ အမှန်ပါပဲ။ ချွေးထွက်လွန်ပြီး အနံ့အသက်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် လူကြားထဲမှာ မဝံ့မရဲနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ ကိုယ်နံ့ကို ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက် ရေမွှေးတွေ၊ Roll-On တွေ သုံးပေမယ့် သူတို့တွေကလည်း ခဏ နာရီပိုင်းလောက်ပဲ ကူညီပေးနိုင်ကြတာပါ။ ဒါဆိုရင် လူကြားထဲမှာ မဝံ့မရဲဖြစ်စေတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်နံ့ကို ဖျောက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးစွမ်းကောင်းတွေ မရှိတော့ဘူးလား။ရှိတာပေါ့။ သဘာဝဆေးစွမ်းကောင်းတွေက ပေါမှပေါပါ။ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့် စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်တဲ့ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေပါပဲ။ အုန်းဆီ ကိုယ်သင်းနံ့လေးကို သင်းပျံ့စေဖို့အတွက် အုန်းဆီက ကောင်းကောင်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်နံ့ မနံအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ရေချိုးပြီးတဲ့အချိန်တိုင်း … Read more
တကယ်ချစ်တဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ မိန်းကလးတို့ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုများ
တကယ်ချစ်တဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ မိန်းကလးတို့ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုများ မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့အရမ်းကို ချစ်မိတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ အရင်လို မဟုတ်တော့ဘဲ တချို့အရာလေးတွေက လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ အရင်က အချစ်အပေါ် ဘယ်လိုပဲ ထင်မြင်ချက်တွေ ရှိရှိ တကယ်တမ်း ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာတော့ လုံးဝကို ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆီမှာ ဒီအချက်တွေကို တွေ့လာရ တတ်ပါတယ်နော် …။ ပေးဆပ်မှု” မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ပေးဆပ်ရမှာကို ဝန်မလေးတတ်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူကို အစစအရာရာ ပေးဆပ်တတ်ကြတာဟာ သူတို့ အရမ်းကို ချစ်လွန်းတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ကို သူတို့ အနစ်နာခံပြီးတောင် ပေးဆပ်တတ်ကြတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် …။ ထောက်ပံ့ပေးတတ်တယ်” မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့တကယ် … Read more
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့် အိပ်မက်ထဲ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၄) ခု…
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့် အိပ်မက်ထဲ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၄) ခု… တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်သူ့အကြောင်း တွေးအိပ်တာလည်း မဟုတ်ပါပဲနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အိပ်မက်မက်တာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲကို တစ်စုံတစ်ယောက် ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာ သင့်ကို အံ့ သြသွားစေမယ့် အကြောင်းအရင်းတွေ ရှိလို့နေပါတယ်။ သင့်အိပ်မက်ထဲကို တစ်စုံတစ်ယောက် ဝင်ရောက်လာခြင်းဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ သူသင့်ကို သတိရနေလို့…. ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲကို မဖိတ်ခေါ်ပဲ ရောက်လာတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ကို သတိတရရှိနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် အိပ်မက်ထဲကို ဝင်ရောက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ် …။ လူတွေရဲ့ စိတ်တွေဟာ တကယ့်ကို အစွမ်းထက်လှပြီးတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြင်းပြစွာ သတိရတဲ့အခါမှာ အဲဒီ့ လူရဲ့ အတွေးထဲ၊ အိပ်မက်ထဲ ထိတိုင်အောင် ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ … Read more
ချစ်သူတွေအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး မပျက်ပြားချင်ရင် ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့ စကား
ချစ်သူတွေအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး မပျက်ပြားချင်ရင် ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့ စကားလေးတွေ စကားလုံးတွေက ဓားတွေထက် ပိုထက်ပြီး လူတောင်သတ်နိုင်တယ်လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ့်ကို အမှန်တရား တစ်ခုဖြစ်ပြီး စကားတစ်ခွန်းကြောင့်လည်း လူတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ရသွားနိုင်ပါတယ် …. ။ အထူးသဖြင့် ချစ်သူအချင်းချင်းကြားမှာ ဒီလိုစကားတွေကို ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်ပါဘူး။ ဒါက ဆက်ဆံရေးကို ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်စေရုံမက မလိုအပ်ပဲ နာကျင်စရာတွေ များစေလို့ပါပဲ … ။ (1) ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေက တကယ်တမ်းမှာ အချစ်လို့ခေါ်ဖို့တောင် ခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်လို့ လက်တွဲထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို စနောက်ပြီးတော့တောင် ကဲ့ရဲ့တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါက တစ်ဖက်လူကို စိတ်ဒဏ်ရာရစေသလို ကိုယ့်လုပ်လိုက်တဲ့ အပြုအမူဟာ ဘယ်လောက်တောင် … Read more
မိန်းကလေးတိုင်း ဝေးဝေး ရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျားအမျိုးအစား (၇) မျိုး…
မိန်းကလေးတိုင်း ဝေးဝေး ရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျားအမျိုးအစား (၇) မျိုး… ဘယ်လောက်ပဲ လန်းနေနေ၊ မိုက်နေနေ လုံးဝ မပတ်သင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေ ရှိ ပါတယ်။ ကိုယ့်အနားမှာ ဒီလို လူမျိုးက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အဖြစ်ရှိနေရင် မိတ်ဆွေ ဆက်ဆံရေး အတိုင်းပဲ ထားပါ …။ လုံးဝကို ကိုယ့်ဘဝထဲ၊ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲကို အဝင်မခံပါနဲ့။ တတ်နိုင်ရင်တော့ အနေနီးပြီး စိတ်ယိမ်းယိုင်တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ရှောင်ပါ။ လုံးဝရှောင် သင့်တဲ့ ယောက်ျား အမျိုးအစားတွေက အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်နော် ..။ (၁) ချစ်သူရှိသူ” ဘယ်လောက်ပဲ လန်းနေနေ၊တော်နေနေ လုံးဝရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျားအ မျိုး အစား ထဲမှာ ဒီလို လူမျိုးပါ ပါတယ်။ ချစ်သူရှိ နှင့်နေပြီးဖြစ်တဲ့ … Read more
ချစ်သူရည်းစားအနေနဲ့တောင် မရွေးချယ်သင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်(၅)မျိုး အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာက လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။မတူညိတဲ့ သူစိမ်းနှစ်ယောက် ပေါင်းစည်းရတဲ့ ဘ၀တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွက် အခက်အခဲများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအတွက်ဆိုလဲ ကိုယ်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းမှ ပျော်ရွင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဖြစ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လူရွေးမှားရင် တစ်သက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲရမှာမို့လို့ လူရွေးမှန်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ မရွေးချယ်သင့်တဲ့ လက်တွဲဖော်ပုံစံတွေကို ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့….. (1) ရိုင်းစိုင်းစွာပြောတက်သူ ချစ်သူရည်းစားဘ၀ထဲက ဆဲဆိုနေတဲ့သူမျိုး၊ ရိုင်းစိုင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ သုံးတက်တဲ့ သူမျိုးကို ကိုယ့်လက်တွဲဖော်အတွက် မရွေးသင့်ပါဘူးနော်။ ချစ်သူဘ၀ထဲက အပြုအမူက လက်ထပ်ပြီးလဲ ဒိလိုပဲဖြစ်မှာမို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး မတွေးထားပါနဲ့နော်။ (2) လက်ပါတက်သူ လက်ပါတက်သူကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူအနေနဲ့တောင် မရွေးချယ်သင့်တဲ့ သူပါပဲ။မသိလို့ တွဲမိခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် လက်ပါတက်တဲ့အကျင့်ကို သိသွားရင် ဆက်တွဲဖို့လုံးဝမသင့်တော်ပါဘူး။အိမ်ထောင်ဘက်အနေနဲ့ကော ချစ်သူအနေနဲ့ကော လုံးဝမရွေးချယ်သင့်တဲ့ ယောက်ျားမျိူးပါနော်။ (3) … Read more
မိန်းမ ယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကို ကြည့်ပြီး အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ရွေးယူမလဲ…
မိန်းမ ယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကို ကြည့်ပြီး အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ရွေးယူမလဲ… သား အတွက် အဖေ့ရဲ့အကြံပြုချက်… ငါ့သား အိမ်ထောင်ဖက် ရှာနေတယ် ဆိုရင် မိန်းမတွေရဲ့ရင်သားနဲ့တင်ပါး အရွယ်အစားအတွက် မင်း စိတ်မပူနဲ့။နှလုံးသား နဲ့ဦးနှောက် အရွယ်အစားအတွက်ပဲ စိတ်ပူပါ။ သူမရဲ့ချစ်မေတ္တာနဲ့ သည်းခံစိတ်အရွယ်အစားအတွက်ပဲ စိတ်ပူပါ ။နောက် ၅ နှစ် ၁၀ နှစ် ကြာပြီးတဲ့အခါ ရင်သားနဲ့ တင်သားတွေက ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ် …။ အခု မင်းအမေကိုပဲ ကြည့်လေ ရင်ပြားကြီးနဲ့ တင်ပြားကြီးသာ ကျန်တော့ပေမဲ့ငါတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြတယ်။ ငါ့သား… ငွေကို ချစ်တဲ့မိန်းမတွေကို သတိထားပါ။ အဲ့ဒီ မိန်းမတွေဟာ အချိန်ပြည့် သူတို့ရဲ့ဆံပင်တွေ အဝတ်အစားတွေ ဖိနပ်တွေ ပိုက်ဆံအိတ်တွေ အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေနဲ့ မိတ်ကပ်တွေအကြောင်း ပြောတတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီ … Read more
(၂)မိနစ်အတွင်း မျက်နှာကို မည်းညစ်ခြင်းကင်းပြီး ကြည်လင်ဝင်းပစေတဲ့ နည်းလမ်း…
(၂)မိနစ်အတွင်း မျက်နှာကို မည်းညစ်ခြင်းကင်းပြီး ကြည်လင်ဝင်းပစေတဲ့ နည်းလမ်း… တစ်ခါတစ်လေမှာ အဆင်သင့် လိမ်းနိုင်တဲ့ အလှကုန်တွေထက် အိမ်တွင်းဖြစ် ဓာတုပစ္စည်းမပါတဲ့ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းတွေက ပိုပြီး အစွမ်းထက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ အကယ်၍ သင့်ရဲ့အသားအရေက ဝင်းပဖြူစင်မှု မရှိဘဲ ဆဲလ်သေတွေကြောင့် မဲညစ်နေမယ်ဆိုလျှင် ဆားသံပုယိုသီးခြမ်းက အပြည့်အဝ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်နော် …..။ သံပုယိုသီးကို မထူမပါးလှီးပြီး ဆားအနည်းငယ်ကပ်ကာ မျက်နှာပြင် အနှံ့ ညှင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ။ (၂)မိနစ်ခန့် ပြုလုပ်ပြီးလျှင် ရေသီးသန့်ဖြင့် ဆေးကြောပြီး ခြောက်သွေ့အောင် သဘက်ဖြင့် ညှင်သာစွာ ပုတ်သုတ်ပါ …။ ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပြီးလျှင် အသားအရေကို ပိုပြီး စိုပြေဝင်းပစေဖို့အတွက် မျက်နှာကို ပေါင်းတင်ပေးပါ …။ ပေါင်းတင်ရမယ့် နည်းလမ်းကတော့ ပျားရည် နှင့် သံပုယိုရည်ကို ရောပါ။ … Read more
ဘဝမှာ ကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေဖို့ လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အသေးအဖွဲအရာ(၄)ခု
ဘဝမှာ ကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေဖို့ လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အသေးအဖွဲအရာ(၄)ခု ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝမှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေ၊ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေကနေ စတင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒါလေးတွေက သေးသေးမွှားမွှားဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ဘဝအတွက် ကြီးကြီးမားမားကို ပြောင်းလဲသွားစေမယ့် အရာတွေပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဘဝကို ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲစေဖို့ ဒီအချက်လေးတွေကနေ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ (1) ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အသိအမှတ်ပြုပါ လူတွေက အိပ်မက်တွေ၊ ပန်းတိုင်တွေတော့ ရှိကြတာပဲ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများသောသူတွေဟာ ဒီအိပ်မက်တွေအတွက် ကျရှုံးမှာကို ကြောက်တတ်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အိပ်မက်တွေကို ရပ်တန့်ပစ်လိုက်ပြီး ရှေ့မဆက်ဖြစ်ကြတာ များပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးဖို့၊ ကိုယ်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ … Read more